Alohan'ny hanombohanao | Outboard Boat Motor Repair
Alohan'ny hanombohanao dia azonao atao ny manao famakiana vitsivitsy momba ny tantaran'i Evinrude sy Johnson Outboards. Nahaliana ahy ireto lahatsoratra manaraka ireto, indrindra ireo tantara momba an'i Oli Evinrude izay namorona indostria iray manontolo 100 taona lasa izay. Ny fahafantarana an'i Oli Evinrude sy ny asany amin'ny famolavolana ireo milina an-dranomasina tsingerina roa dia hanome anao fankasitrahana lehibe ny fivoaran'ny motera. Ny iray amin'ireo lahatsoratra etsy ambany dia mitantara ny fomba nanandramanan'i Oli Evinrude ny maodely voalohany nataony tamin'ny maotera ivelany tamin'ny 1909 teo amoron'ny renirano iray tao Milwaukee. Manontany tena aho raha misy marika ara-tantara eo amin'io toerana io na raha nisy nanamarika ny faha-100 taonan'ny hetsika tantara toy izany. Manana fianakaviana ao Milwaukee aho, ary azonao atao ny miloka fa iray andro izao, handeha haka sambo kely aho ary ny maotera tranainy indrindra ananako ary hitako io toerana io mba hahafahako mametraka eo fotsiny hiteny hoe teo aho. Mikasa ny hamaky bebe kokoa momba ny tantaran'ny motera sambo aho. Ny Johnson Motor Corporation dia natomboky ny rahalahy sasany tany Terre Haute Indiana. 60 kilaometatra monja avy eo amin'ny misy ahy ity! Oli Evinrude dia manan-janaka lahy, Ralph Evinrude, izay nanampy tamin'ny fampandrosoana sy ny fitsapana ireo motera sambo ivelany ihany koa. Ralph Evinrude dia niaraka tamin'i Johnson tamin'ny 1936 mba hamorona ny Outboard Motor Corporation izay fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe OMC. Karl Kiekhafer dia nanomboka ny Mercury Marine tamin'ny 1940, ary mbola mitohy matanjaka io orinasa io ankehitriny. Mercury koa dia tompon'andraikitra amin'ny maro amin'ny fandrosoana amin'ny motera sambo roa-tsambo.
Karl Kiekhaefer, mpanorina ny Tantara Mercury Marine Company
Alohan'ny hanombohanao dia mila fantarinao tsara izay motera anananao. Tokony ho fantatrao ny taona, ny maodely ary ny nomeraon-telefaona môtô mba hahafahanao mividy ny faritra marina ary tsy mila mamerina azy ireo hamerenana. Ny mpivarotra ampahany tsara dia tsy te-hivarotra anao na inona na inona ho an'ny motera anao raha tsy fantany izay anananao. Ny fandinihana ny maodely sy ny taona dia tsy mandeha. Mahagaga ny fahitana fa mora ny manadino ny taonan'ny motera sambonao. Raha mahazo moto sambo taloha ianao, dia tsy fantatrao hoe firy taona sy maodely izany. Ny isa maodely dia mazàna amin'ny tag vy mifatotra amin'ny ilany havia amin'ny singa ambany. Misy tranokala azonao aleha ary hianaranao ny fomba hakana fampahalalana amin'ny isa maodely toy ny taona, na fanombohana herinaratra na tady, tohotra fohy na lava, ary mety ho fiasa hafa toa ny avy any Etazonia na Kanadiana ny motera. Ary koa, ny lokon'ny loko amin'ny motera dia hanampy anao hamaritra ny taona. Raha vantany vao hitanao ny moterao dia azonao atao ny mahatsapa hoe firy sy firy taona izay no namokatra io motera manokana io. Tena hanampy izany raha ny amin'ny fitadiavana ny faritra satria mety hiasa amin'ny moterao koa ny faritra ho an'ny motera hafa. Nianatra zavatra betsaka tamin'ny fikarohana aho e-Bay fa toy izany koa ny famakiana ny zavatra Motors sy ny mpivarotra maintsy momba azy ireo. Ihany koa ny fomba tsara hahazoana hevitra ny zavatra manan-danja izy ireo. Rehefa manomboka manamy e-Bay, Dia mety hanomboka mihitsy aza mba hahita sasany izay mendrika ny ho maotera ny nateriny tsara vidiny.
Archive ny taloha ny OMC Modely-taona tranonkala
Hitako fa mahasoa ny manana boky vitsivitsy momba ny fitazonana motera ivelany. Tena nanampy ny famakiana ny fomba fiasan'ny motera sambo roa. Arakaraka ny namakiako sy nahalalako no vao hitako fa tena tsotra ireo milina ireo. Mandehana any amin'ny tranombokinao eo an-toerana ary jereo ao amin'ny fizarana referansa izay hahitanao boky torolàlana momba ny serivisy sy boky fanamboarana motera ivelany. Ny boky torolàlana momba ny serivisy izay mandrakotra ny motera manokana anao dia manampy foana.
Te-hahita loharano tsara ianao. Hitako fa ny fivarotana fivarotana kojakoja NAPA dia nanolotra katalaogin-dranomasina ary ny nahagaga ahy dia manana ny ampahany ilaiko amin'ny tahiry ao amin'ny foibe fizarana eo an-toerana izy ireo. Ny fivarotana kojakoja fiara hafa CarQuest dia manana ny "Sierra Marine Parts Catalog" izay zavatra mitovy amin'ny isa ampahan'ny mitovy amin'ny mpampiasa NAPA. Fanamby ny fitadiavana izay ampahany ilaina. Vantany vao fantatro izay nilaiko dia afaka nahazo azy ireo haingana i NAPA. Ianao koa dia te-hahita mpivarotra OMC an-dranomasina tsara. Tsy tiako ny mividy entana amin'ny mpivarotra sambo ary mandoa ny vidiny lafo, saingy misy zavatra azonao atao ihany. Misy toerana maromaro ao amin'ny tranonkala ahafahanao miantsena ho an'ny faritra an-dranomasina. Tokony ho azonao antoka fa fantatrao fa ny zavatra ividiananao dia tena ilainao amin'ny motera ivelany. Ny olan'ireto mpivarotra ireto dia ny fironany hivarotra kojakoja amina motera maro karazana. Ao amin'ireo tetikasako, manana rohy mankany amin'ny Amazon.com aho ahafahanao mividy ireo faritra manokana nampiasako. Ny fividianana avy any Amazon dia manampy amin'ny fanohanana an'ity tranonkala ity ary amin'ny famatsiam-bola tetikasa hafa. Zavatra iray hafa tokony hatao ny mijery ao amin'ny bokin'ny telefaona ary jereo raha misy tokotanin'ny famonjena sambo eo akaikinao. Nahita iray aho teo amin'ny ilany atsimo amin'ny Indianapolis izay lavitra ahy avy eo ary mankafy mandeha any hijery fotsiny.
Misy tabilao fifanakalozan-kevitra tsara marobe izay ananan'ny mekanika za-draharaha vonona hamaly fanontaniana amin'ny fanamboarana azy-ny-olona fotsiny satria te hanampy izy ireo. Tranonkala iray manokana no tiako http://www.iboats.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi Nianarako zavatra be dia be avy amin'ny famakiana fanontaniana avy amin'ny olona toa ahy izay te-hanamboatra ny môtô lakany taloha. Gaga aho tamin'ny fotoana voalohany nataoko nandefasana fanontaniana ary nahazo valiny tsara afaka minitra, na dia efa alina be aza ny andro. Ny sasany amin'ireto tovolahy ao amin'ny solaitrabe ireto dia mekanika an-dranomasina tena manana traikefa efa an-taonany maro. Toa tian'izy ireo ny manampy lehilahy toa ahy amin'ny fanomezana valiny sy torohevitra. Toy ny zavatra rehetra amin'ny fiainana dia mety manana olona samihafa ianao manolotra vahaolana samihafa.
Ilaina ihany koa ny mahita olona mitady mekanika eo an-toerana na namanao efa za-draharaha izay vonona ny hanafaka anao raha sendra zavatra tsy takatry ny sainao ianao. Raha ny amiko dia manana namana iray izay manana trano fivarotana LawnBoy aho. Niasa tao amin'ny marina koa izy tamin'ny fahazazany ary tsy maintsy nanamboatra motera tany ivelany. Betsaka ny tetika azo ampiasaina hanamorana ny asa fanahafana ireo motera ireo. Tsy ho hitanao amin'ny ankamaroan'ireo tetika ireo ao amin'ny boky torolàlana momba ny serivisy ny serivisy satria mety tsy izy ireo no vahaolana amin'ny boky.
Manamboara toerana tsara hanaovana ny asa. Raha ny amiko dia manana garazy sy fitaovana fototra aho. Nanao paosin-motera niaraka tamin'ny fonontam-baravarana $ 5.00 sy mpivady 2x4 aho. Nataoko nijoro tsara be ny moto niaraka tamin'ny tongotro lava fanampiny, ka rehefa notehiriko ilay maotera tany ivelany tamin'ilay haavo nilamina. Rehefa manao tetikasa ao amin'ny garaziko aho dia tiako ny manamboatra latabatra mamoritra hametrahana ampahany sy fitaovana ary hanokana an'io tampon-databatra io amin'ny tetikasako mandra-pahavitany. Mety manana tetik'asa hafa amin'ny latabatra hafa aho, saingy tsy tiako ny mifangaro ny tetikasako.
Aza maika. Antenaina fa manao izany ho fahafinaretana sy fahafaham-po ianao. Ho ahy dia tetik'asa ririnina ity ary antenaiko fa hitazona ahy tsy ho ao an-trano, lavitra ny fahitalavitra, ary mieritreritra mandritra ny faran'ny herinandro maromaro sy hariva. Raha tonga amin'ny fotoana ilako ampahany aho dia hijanona tsotra izao, angamba hanao asa fanadiovana, ary mivoaka ary mahazo ilay ampahany ilaiko alohan'ny hanohizana. Raha tokony hiasa amin'ireo motera ireo aho amin'ny maodely famokarana, na ho an'ny mpanjifa, dia tsy mino aho hoe hankafy azy io mihitsy. Satria manao izany ho an'ny fahafinaretako sy ny fahafaham-poko aho, heveriko ho fialamboly ny fiasana amin'ireo motera ireo ary afaka mandany ny fotoana rehetra tadiaviko manao ny asa tsara.
Please KITIHO ETO hanohy ho an'ny Projects Page.